Deegaanka Gaaleef oo ka tirsan degmada Jowhar oo la gubay – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imanaya magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Sh/dhexe ayaa sheegaya in dabley hubeysan oo xalay soo weeraray deegaankaas ay gubeen dhammaan guryihii ku yiil deegaanka Gaaleef oo qiyaastii 25km ka xigta magaalada Jowhar.
Dadka degen tuulada ayaa xalay saacadu markii ay ahayd 10 ka habeenimo waxa ay isaga carareen tuuladoodii kadib markii ay maqleen inay dagaalyahano ka tirsan Alshabaab ay ku soo jeedaan.
Mid kamid ah dadka degenaa tuulada ayaa sheegay in gebi ahaan tuuladii la gubay ayna ku basbeeleen wixii hanti ah ay lahaayeen.
“Aniga waxaa igaga gubtay dukaan,makiinada cajiinka lagu shiido iyo mooto.”ayuu yiri mid kamid ah dadka deegaanka Gaaleef oo diiday in magaciisa la sheegay.
Qasaaraha ka dhashay dabkan ayaa waxaa ka mid ah in dhammaan keydkii raashinka ay lahaayeen dadkii degenaa tuuladaa ay ku gubteen, sidoo kale waxaa ku gubtay gaadiid iyo hanti kale.
Wararka ayaa waxa kale oo ay sheegayaan in shankamid ah duqeyda deegaankaa ay hore u kaxeysteen Alshabaab ee halkaa xalay gaaray.
Ma jiro illaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka degmada Jowhar ee la xiriira arrimaha ka soo cusboonaaday deegaanka Gaaleef.